We She Me: Hokkien Mee
Beef Noodle အကြောင်း ရေးတုန်းက စာဖတ်သူ တစ်ယောက်က ဒီလို ပြောသွားပါတယ်။ (အဆင်ပြေ သလို ပြန်ရေးထားတာပါ။)
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အမဲသား မစားပါနဲ့ဗျာ။ တခြား စားလို့ ရတဲ့ အသား ငါးတွေ ရှိနေသေးတာပဲ။ (ခင်ဗျား ပြောသလို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ) နွားတွေကို စပါးစိုက်ဖို့ မသုံးပေမယ့်၊ ကျွန်တော်တို့ သောက်ဖို့ နွားနို့တွေ၊ ဒိန်ချဉ်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေ အတွက် နို့မှုန့်တွေကို သူတို့ဆီကပဲ ရတာ မဟုတ်လား။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် ကြားဖူးတာ တစ်ခုက အကောင်ပိုကြီးလေ၊ သူ့ကို သတ်တဲ့သူမှာ အား ပိုထည့်ရတဲ့ အတွက် ပိုပြီး အပြစ်ကြီးပါတယ်လေ။
အဲဒါနဲ့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ Seafood တွေမျိုးစုံနဲ့ Hokkien Mee လုပ်စားပါတယ်။ Hokkien Mee ဆိုတော့ တရုတ် Hokkien တွေ စားတဲ့ ခေါက်ဆွဲပေါ့။ Hokkien ဆိုတာ ဟိုး တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်းက ဖူးကျန့် (Fujian) တရုတ်တွေပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဖူးကျန့် တရုတ်တွေ ရှိပါတယ်။ Hokkien Mee လို့ ဆိုပြန်ရင်လည်း မျိုးကွဲတွေက ရှိနေပြန်သေးတယ်။ အကြော်ရှိတယ်၊ အပြုတ်ရှိတယ်၊ ပဲငံပြာရည်နဲ့ မည်းမည်းကြော်တာရှိမယ်။ သူ့အရပ် သူ့ဒေသအလိုက် ကွဲပြားသွားတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်စားတာက စင်္ကာပူစတိုင် အကြော်ပါ။ ပုစွန်နဲ့ ကြော်လို့ Fried Prawn Mee/Noodle လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူရောက်မှ စားဖူးပြီး ကြိုက်သွားတဲ့ အစားအစာ တစ်ခုပါပဲ။ Food Republic က သားစဉ်မြေးဆက်ကြော်တဲ့ ဆိုင်ကဟာကို အကြိုက်ဆုံးပေမယ့် တခြား နေရာတွေမှာ စားလည်း စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ အပြုတ်ကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ နေရာမှာ စားလို့ကတော့ အရည်ကျဲကျဲမှာ ခေါက်ဆွဲကတခြား၊ ပုစွန်ကတစ်ခြားနဲ့ အင်မတန်ချာတဲ့ ဟင်းရည်ပဲ ရပါမယ်။ Prawn Mee Soup ဆို ကောင်းလည်း ကောင်းပြီး၊ စင်္ကာပူမှာ ကျွန်တော်ကြိုက်တာ (စားဖူးတဲ့ ထဲမှာ) တစ်နေရာပဲ ရှိပါတယ်။ Amoy Street Prawn Mee Soup ပါ။ ၀က်ရိုးတွေနဲ့ ညကတည်းက ကျနေအောင် ပြုတ်ထားတဲ့ Soup Base မှာ ပုစွန်တွေပါ ပြုတ်ထားပြီး အချိုမှုန့် မပါဘဲနဲ့ အင်မတန် သောက်လို့ ကောင်းတဲ့ တန်းစီပြီးဝယ် သောက်ရတဲ့ Soup ပါ။ အဲဒီလောက် ကောင်းအောင်တော့ အိမ်မှာ မလုပ်တတ်လို့ အကြော်ပဲ လုပ်စားပါတယ်။
အကြော်ကတော့ လွယ်ပေမယ့် တခြား ခေါက်ဆွဲကြော် နည်းတွေနဲ့ နည်းနည်း ကွာပါတယ်။ ဂျုံခေါက်ဆွဲအပြင် ဆန်ခေါက်ဆွဲ (ကြာဆံကြီး/မုန့်တီ နန်းလတ်) လည်း ပါပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ Noodle နဲ့ Bee Hon ရောထားတာ ပြောတယ်ပေါ့။ Seafood အတွက်တော့ ပုစွန်ရယ်၊ ကင်းမွန်ရယ် ထည့်ပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သွားစားရင်တော့ ဒယ်အိုး ချခါနီးကျမှ ပုစွန်တို့ ကင်းမွန်တို့ကို အစိမ်းထည့်လိုက်တော့ ပိုချိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပုစွန်ကို Cooked ၀ယ်လိုက်ပြီး၊ ကင်းမွန်ကိုလည်း နည်းနည်း ကြော်ထားပါတယ်။ ငါးဖယ်ပါ ထည့်ရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တော့ မထည့်လိုက်ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို အခွံခွာပြီးတော့ နည်းနည်း ညက်အောင် ခြေထား၊ ထောင်းထားပါတယ်။ အရွက်ကတော့ ပဲပင်ပေါက်ရယ်၊ တရုတ်နံနံရယ် ထည့်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဆိုင်တွေမှာ ၀က်ဆီသုံးပြီး ကြော်လို့ ပိုကောင်းပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း လူတွေက Health Conscious ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် "No Pork, No Lard" ဆိုပြီး မသုံးတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အရင်နေ့တွေက ကျန်တဲ့ ၀က်သား သုံးထပ်သားချက်ထဲက ၀က်သား အဆီရော ၃ ၄ တုံးကို သေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါတယ်။
စားခါနီးကျမှ ကြော်ပါတယ်။ တရုတ်ဒယ်အိုး (Wok) ထဲမှာ ဆီပိုပိုသာသာ ထည့်ထားပြီး ဆီကျက်တာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို ထည့်ကြော်ပါတယ်။ ဆီချက် ချက်သလို နီလာတဲ့ အထိမစောင့်ဘဲ အစိမ်းနံ့ မရှိတော့တာနဲ့ ၀က်ဆီတုံးလေးတွေ နည်းနည်း ပါတယ်ဆိုရုံ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်ဥကို ဖောက်ထည့်ပြီး ဆီပူထဲမှာ အဆက်မပြတ် မွှေလိုက်ပါတယ်။ ကြက်ဥကို ဒီလို ထည့်ကြော်လိုက်တာနဲ့ ဆီတွေ စုပ်သွားပေမယ့် ဆီထပ်ထည့်စရာ မလိုပါဘူး။ (ဖြစ်ချင်တော့ ဧည့်သည်ကို ကျွေးတဲ့ အလှည့်မှ ကြက်ဥကို ဒီလို မကြော်လိုက်မိလို့ နောက်မှ ထည့်ကြော်တာ ကြက်ဥ ညှီနံ့ နည်းနည်း ထွက်သွားပါတယ်) ကြက်ဥတွေ ကျက်သွားမှ ပဲပင်ပေါက် ထည့်ပြီး ချက်ချင်းပဲ ငါးငံပြာရည် နည်းနည်း ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ငါးငံပြာရည်ပါ။ ပဲငံပြာရည် မဟုတ်ပါဘူး။ ငါးငံပြာရည် သုံးတဲ့ ရှားပါ တရုတ်အစာပါပဲ။ ပဲပင်ပေါက်တွေ နွမ်းသွားတဲ့ အထိ မစောင့်ဘဲ ခေါက်ဆွဲ နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပြီး ရေနည်းနည်းပါ ထည့်ပြီး အဖုံး အုပ်ထားပါတယ်။ ဆားနည်းနည်း များများ ခပ်ရပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆို ပေါ့တတ်ပါတယ်။ မွှေလိုက်၊ လိုအပ်ရင် ရေနွေးနည်းနည့် ထပ်ထည့်လိုက်နဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေ အိသွားတဲ့ အထိ အရည် စပ်စပ်နဲ့ ကြော်ပါတယ်။ ကျက်ခါနီးမှ တရုတ်နံနံခတ်၊ ပုစွန်တွေ၊ ကင်းမွန်တွေ ထည့်ရောမွှေပြီး နည်းနည်း ထပ်ကြော်ပြီး ပန်းကန်ထဲ ခပ်ထည့် ပူပူနွေးနွေး စားကြပါတယ်။ Food Republic မှာ စားရတာတော့ သူတို့က ပန်းကန်ထဲမှာ ပြောင်းဖူးဖတ် ခင်းပြီး ထည့်ပေးလို့ ဖတ်နံ့လေးနဲ့ စားရပါတယ်။၊ ငယ်ငယ်တုန်းက (ကြွတ်ကြွတ်အိပ်တွေ မပေါ်ခင်တုန်းက) တရုတ်ဆိုင်က ခေါက်ဆွဲကို ပါဆယ်ဝယ်လာရင် ဖတ်နဲ့ သတင်းစာနဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်လို့ သူ့အပူနဲ့ လှောင်ပြီး ပိုနူးသွား၊ ဖတ်နံ့ မွှေးသွားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် စားရသလိုပါပဲ။ ကြက်သွန်ဖြူရယ်၊ ငါးငံပြာရည်ရယ်နဲ့ ကြော်ထားလို့ တမူထူးတဲ့ အနံ့ အရသာအသစ်နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်ဟာတော့ မြန်မာပြည်မှာ စားလာတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေနဲ စာရင်တော့ တစ်မူထူးနေပါတယ်။ စင်္ကာပူက ဆိုင်တွေမှာ ဆိုရင်တော့ သံပုရာသီး သေးသေး ချိုချို မွှေးမွှေးလေးတွေရယ်၊ ငရုတ်သီးအနှစ်တွေပါ ပေးတတ်ပြီး၊ ကျွန်တော်ကတော့ ပထမ ဒီအတိုင်းစားပြီး ၃ပုံ ၁ပုံလောက် ကျန်ရင်တော့ သံပုရာသီး ညှစ်စားပါတယ်။ Seafood တွေ၊ ၀က်ဆီတွေနဲ့ Hokkien Mee ဟာ အရသာကလည်း အပြည့်၊ Cholesterol ကလည်း အပြည့်နဲ့ ဆိုပေမယ့် စင်္ကာပူရောက်ရင် မဖြစ်မနေ စားကြည့်ရမယ့် အစားအစာ တစ်ခုပါပဲ။ ။
Phyo Wai Kyaw - 12/1/07, 11:36 AM
လူသဘာဝ အတိုင်း နေ့တိုင်း မြင်တွေ့နေရတော့ ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ တန်ဘိုးထား ရကောင်းမှန်း မသိကြဘူး... AKM ရေးပြမှပဲ တန်ဘိုးထားပြီး ခုံခုံမင်မင် နဲ့ စားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတော့တယ်...
အဲဒီသဘောလိုပါပဲ လူတွေကလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်တော့မှ မသေတော့ဘူး လို့ အထင်မှားနေလေတော့ အတူတူရှိနေကြတဲ့ အချိန်လေးတွေကို တန်ဘိုးထားရကောင်းမှန်း မသိကြဘူး...
pandora - 12/1/07, 11:30 PM
Andy Myint - 12/3/07, 9:51 AM
တရားတွေ ရနေပါလား ကိုဖြိုး … ကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ်.. မပန်ဒိုရာ.. ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိတော့ အစားတွေချည်းပဲ လုပ်စားနေတယ်။ တယ်လည်း အမှတ်သညာ ကြီးသကိုး.. ဘဲဥမစားလိုက်ရတာကို။ ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်ခါမှ ဘဲဥ အစစ် မစားလိုက်ရပါဘူးဗျာ.
MyMetro - 12/5/07, 5:59 AM
စားချင်လိုက်တာ..။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ရင် တော်တော်ကောင်းမှာပဲ။ ဒါမှ လာတောင်းစားလို့ ရမှာ။
Phyo Wai Kyaw - 12/10/07, 6:06 PM
"အိုတ" လုပ်စားပါလား... အုန်းရွက်လေးတွေ နဲ့ ထုတ်ပြီးတော့ ကင်စားရင် မွှေးလို့ :P
imaginary clouds no2- 12/11/07, 2:42 PM
Anonymous - 12/11/07, 6:44 PM
Thanksaton for sharing your cooking. Where you buy for white small noodle to mix? Is it dry one or original one?
Andy Myint - 12/12/07, 10:23 AM
You are very welcome. I got white noodle from nowhere else but Chinese grocery shop. It’saprocessed one and packed inavacuumed pack. Neither dry nor as fresh as those in Myanmar or Singapore. But it is OK.
ကိုမောင်တိန်… အပျော်ဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်ပေါ့.. ခင်ဗျားတို့က ၀ယ်စားလို့ ရနေတာပဲ။
ကိုဖြိုး .. “အိုတ” ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဗမာ ငါးပေါင်းထုပ်ကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်။
မီထရို… အိမ်နီးချင်း ဖြစ်မှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ… လမ်းကြုံရင် ၀င်စားသွားလို့ ရပါတယ်။
Thu Thu - 8/6/09, 5:00 PM
Thu Thu - 8/6/09, 5:02 PM
Singapore က အစားအစာ တွေထဲမှာ ကျွန်မလည်း Hokkien Mee ကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ လုပ်စားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်မလည်း မုန့်ဟင်းခါးရော၊ Hokkien Mee ပါ အရင် အချိုအတိုင်း စားပြီး တ၀က်ကျော်ကျော်လောက်မှ သံပုရာသီး၊ အစပ် ထည့်စားတာ။ ကျွန်မ အမျိုးသားတောင် နောက်ပိုင်း အဲသလို လိုက်စားရရှာတယ်။ :)